Buugani waxa uu leeyahay cutubka dhan on iskaashiga mass, laakiin buug fikirkani waa iskaashi mass ah. Waxay jeelyihiin in si fudud kitaabkan ma jiri lahayd ahayn taageerada deeqsi ah dad badan oo cajiib ah iyo ururada. Waayo, in, waxaan si aad ah ugu mahad celinayaa ahay.
Dad badan ayaa ka dhiibteen ra'yigooda ku saabsan mid ka mid ah ama in ka badan ee cutubyada kuwaas oo ama la sheekaysiga kordhiyay ila saabsan buugga. Aad ayaan ugu mahad Solon Baracas, Tom Boellstorff, Clark Bernier, Michael Bernstein, Megan Blanchard, Josh Blumenstock, Dalton Conley, Yo-Yo Chen, Eetaan Fast, Nick Feamster, Cybelle Fox, Maggie Frye, Sharad Goel, Jake Hoffman, Joanna Huey , Patrick Ishizuka, Ben Jones, Dawn Koffman, Sasha Killewald, Harrissa Lamothe, Andrés Lajous, David Lee, Amy Lerman, Meagan Levinson, Andrew Ledford, Dai Li, Karen Levy, Ian Lundberg, Xiao Ma, Andrew Mao, John Laawi Martin, Judie Miller, Arvind Naranyanan, Gina Neff, Cathy O'Neil, Nicole Pangborn, Ryan Parsons, Devah Baaqe, Arnout van de Rijt, David Rothschild, Bill Salganik, Laura Salganik, Christian Sandvig, Mattias Smångs, Sid Suri, Brandon Stewart, Michael Szell, Sean Taylor, Florencia Torche, Rajan Vaish, Taylor Winfield, Han Zhang, iyo Simone Zhang. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo ardayda ee Sociology 503 ee Spring 2016 for reading version hore of qoraal gacmeedka ah, iyo ardayda ee koorsooyinka aan sanadihii la soo dhaafay, kuwaas oo ay ka caawiyay qaab badan oo fikrado ah kitaabkan.
Waxaan lahaa fadhigan qoraal gacmeedka buug la yaab leh in la abaabulay ee marti Center Princeton ee Study ee Democratic Politics. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Marcus hor iyo Michele Epstein taageerada shirka. Markaasaa, waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dhamaan ka qaybgalayaasha waqti ka noloshooda mashquul qaaday in ay iga caawiyaan kor loogu qaado buugga: Elizabeth Bruch, Paul DiMaggio, Filiz Garip, Meagan Levinson, Karen Levy, Mor Nacamaan, Sean Taylor, Markus hor, Jess Metcalf, Brandon Stewart, Duncan Watts, iyo Han Zhang. Waxaa run ahaantii waxay ahayd maalin la yaab leh, waxaana rajeynayaa in aan awoodin in ay marin qaar ka mid ah xigmadda xagga qolka in galay gacmeedka finalka.
A dadka kale dhowr mudan mahad gaar ah. Duncan Watts ahaa PhD my, oo ay ahayd cilmi baaris aan PhD-iga dhigtay in ay ogaadaan sida xiiso leh noocan oo kale ah cilmi noqon karaa; oo aan waayo-aragnimo u lahaa inaan dugsiga ka qalin kitaabkan ma jiri doono. Paul DiMaggio ahaa qofkii ugu horeeyay ee igu dhiiri in ay qoraan buugga this. Waxaa oo dhan ku dhacay mid ka mid ah galabta intii aannu labada sugaya mashiinka kafeega ee Wallace Hall, oo weli waan la xasuusto in ilaa wakhtigaas, fikradda qoraal buug marna gudbeen maskaxdayda. Mararka qaarkood halka aan dhab qoray kitaabkan waxaan Paul nacladay uu soo jeedin, laakiin hadda waxaan ahay si qoto dheer ugu mahad celinayaa isaga loogu i qanci oo aan sameeyey in xaqiiqda wax in la yidhaahdo, iyo in dadka xiiseyn lahaa. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Karen Levy for reading dhowaad dhammaan cutubyada ee foomamka iyo messiest ay horrayn, ayay iga caawiyay arkaan sawirka wayn markii aan ku xayiran in caws. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Arvind Narayanan loogu caawiyo i diiradda iyo nadiifin doodaha kitaabkii ka badan qado badan oo cajiib ah. Brandon Stewart had iyo jeer ku faraxsan yahay in chat ama ka fiiri cutubka, iyo fikrado iyo dhiirigelin i horay ayaan u soconaa, xitaa marka aan bilaabay in geesgees u fakadaan. Markaasaa, ugu dambeyntii, waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Marissa King loogu caawiyo ii soo horyaalka in kitaabkan hal galab qoraxdu ee New Haven.
Iyadoo qoraal kitaabkan, waxaan ka taageero saddex hay'adaha la yaab leh ka faa'iideysteen. First, Jaamacadda Princeton, Waxaan ka mahadcelinayaa in aan shaqaalaheeda iyo ardayda ee Department of Sociology abuurista iyo dayactirka dhaqanka diiran iyo taageero. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Center for Information Technology Policy igu caddaynaya guriga la yaab leh caqliga labaad halkaas oo aan ka badan oo ku saabsan sida kuwa cilmiga kombuyuutarka arki dunida baran karin. Qaybta kitaabkan ku qoran meesha intii aan ku jiray fasax ka Princeton. First, Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Microsoft Research, New York City isagoo aan guriga ee 2013-14. Jennifer Chayes, David Pennock, iyo group cilmiga bulshada xisaabeed oo dhan waxay ahaayeen ciidammada oo cajiib ah iyo shaqaalaheeda. Second, Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Cornell Tech isagoo aan guriga ee 2015-16. Dan Huttenlocher, Mor Nacamaan, iyo qof walba oo bulshada Technologies Lab ka caawiyay dhigi Cornell Tech jawi ku haboon ii dhammayn kitaabkan. Siyaabo badan kitaabkan ku saabsan yahay isku fikrado ka xogta sayniska iyo cilmiga bulshada, iyo waxaan qabaa in labada Microsoft Research iyo Cornell Tech yihiin dad lagu daydo ee noocan oo kale ah garaadka cross-pollination.
Iyadoo qoraal kitaabkan, waxaan lahaa gargaar cilmi fiican ka saddex qof. Aad ayaan ugu mahad Han Zhang, gaar ahaan uu u caawimo samaynta garaafyada ee buuggan. Aad ayaan ugu mahad Yo-Yo Chen, gaar ahaan iyada oo gargaar qoritaanka hawlaha kitaabkan. Ugu dambeyntii, ayaan ugu mahad celinayaa Judie Miller, gaar ahaan iyada oo gargaar proofreading iyo raad hoos cayn kasta qalabka maktabadda.
Waxaan helay warcelin waxtar leh oo ku saabsan fikradaha ee kitaabkan at tiro ka mid ah wada hadal. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qabanqaabiyeyaasha iyo ka qaybgalayaasha ee dhacdooyinka soo socda: Cornell Tech Connective Media Seminar, Princeton Center for the Study of Democratic Politics Seminar, Stanford HCI shirka, Berkeley Sociology shirka, Group Working Foundation Sage Russell on xisaabeed Cilmiga Bulshada, Princeton DeCamp Bioethics seminar, Columbia tiro ahaaneed Methods in Guddoomiyaha Taxanaha Booqashada Sciences bulshada, Princeton Center for Technology Information Policy Technology iyo Society Reading Group, Institute Simons waayo aragtida reer barashada Kombiyuutarka weydaarsi on Tilmaamaha New in xisaabeed Science Social & Science Data, Data oo Workshop Society, University of Chicago, Sociology shirka, shirka Caalamiga ah ee xisaabeed Cilmiga Bulshada, Data Science School Summer ee Microsoft Research, oo Society for warshadaha iyo Applied Xisaabta (SIAM) shirka sanadlaha ah.
version The web kitaabkan waxaa la abuuray by Luke Baker, Paul Yuen, iyo Alan Ritari of Group Agathon ah. Shaqaynta iyaga waxaa la jiray on mashruucan ahaa raaxo ah, sida had iyo jeer. Mid ka mid ah wax aan jeclaa oo ku saabsan mashaariicda noo wada waa in aan sii wado barashada ka iskaashi our. Waxaan si gaar ah jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Luke for sidoo kale horumarinta geedi socodka dhismaha ee kitaabkan iyo caawinta ii maraan geesood mugdiga ah ee git, pandoc, oo waxaad ka samaysaa.
Buugani iyo website la socda ayaa la abuuray tiro ka mid ah mashaariicda il furan. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qayb u mashaariicda soo socda: git, pandoc, pandoc-crossref, pandoc-citeproc, pandoc-citeproc-Distoorka, fikrad, dhexaadiyayaal, Bootstrap, Nokogiri, GNU samee, Vagrant, Ansible, latex, iyo Zotero. All garaafyada kitaabkan la abuuray in R (Team 2016) , iyo sida loo isticmaalo ee baakadaha soo socda: ggplot2 (Wickham 2009) , dplyr (Wickham and Francois 2015) , reshape2 (Wickham 2007) , stringr (Wickham 2015) , baabuurta (Fox and Weisberg 2011) , cowplot (Wilke 2016) , png (Urbanek 2013) , Roobka (Team 2016) , ggrepel (Slowikowski 2016) , iyo emojifont (Yu 2016) . sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Kieran Healy xilka uu blog in helay igu bilaabay pandoc. Markaasaa, waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Arnout van de Rijt iyo David Rothschild ah bixinta xogta loo isticmaalo in lagu cilinta qaar ka mid ah garaafyada ka waraaqaha ay, waxaana jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Josh Blumenstock samaynta files taranka dadweynaha uu warqad.
At Princeton University Press, Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Eric Schwartz rumeeyey mashruucan bilowga, iyo Meagan Levinson kuwaas oo ka caawiyey waxaa dhab ah ka dhigi. Meagan ahaa editor ugu fiican in qoraa ku yeelan karto; Waxaan dareemay sida iyadu mar walba waxaa jiray in ay taageeraan mashruucan, in goor wanaagsan iyo jeer u xun. Oo, hadda marka aan ka heli naftayda la siiyo jawaab-celin dadka kale, waxaan isku dayaa inaan uga billowdo style dhis taxadir Meagan ee.
Ugu dambeyntii, waxaan jeclaan lahaa in aan ugu mahad naqayaa saaxiibada iyo qoyska. Waxaad u taageero mashruuca siyaabo badan oo, inta badan siyaabo in aad xitaa ma oga. Waxaan si gaar ah jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Waalid, Laura iyo Bill, iyo waalidka-in-aan soddogga, Jim iyo Cheryl, ay taageero aan dhamaanayn inta mashruucan on tegey oo ku saabsan iyo saabsan. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo kids aan. Eli iyo Theo, i aad jeer badan oo la weydiiyay markii aan kitaabkayga dambeyntii waxaa dhammaan doonaa. Well, jawaabta hadda waa. Markaasaa, ugu muhiimsan, waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo naagtiisii ​​Amanda. Waan ogahay in mashruucan ku lug leh wax badan oo taxne kore iyo hoose, oo aan had iyo kuwo Mahadin aad marna-liicliicashola'aan jacaylka iyo taageero.